Linspire 7, kugovera kunomira kuve Lindows | Linux Vakapindwa muropa
Nekuda kwekuchinjisa vashandisi vehurongwa hwekushandisa, vagadziri vakasiyana siyana nemakambani vakasarudza kugadzira zvakagoverwa zveGnu / Linux zvinotaridzika seWindows uye zvinomhanyisa Windows zvinoshandiswa. Kugoverwa uku kwainzi Lindows. Iwo akanyanya kuzivikanwa ekuparadzirwa kweWindows anga ari ReactOS uye Linspire. Nekudaro, imwe yadzo haichisiri Lindows kuti ive imwe yekuparadzira kwakavakirwa paUbuntu.
Linspire yakatanga Linspire 7 uye Freespire 3, maBhaibheri maviri eiyo imwechete yekushandisa system. Yekutanga inoenderana nekubhadharwa kwakabhadharwa (hongu, kunyange ichinzwika kunge isinganzwisisike, iripo) uye Freespire 3 iri yemahara vhezheni yeiyo yapfuura iyo isina mamwe mabasa, kusanganisira rutsigiro uye kugadzirisa.
Linspire 7 yakavakirwa paUbuntu LTS pane iyo yavakaunza Google Chrome, Waini uye akati wandei emulators ayo anotendera iwe kuisa mamwe maWindows application seMicrosoft Office kana mimwe mitambo yemavhidhiyo. Linspire 7 ichave nerutsigiro kusvika 2025, asi iyo premium vhezheni haizove nerutsigiro ruzere kusvika musi iwoyo asi kwegore. Nekudaro, vashandisi veLinspire 7 vanofanirwa kubhadhara rezinesi yemadhora makumi masere uye mukudzoka vanowana rubatsiro rwekutanga uye nekukurumidza kutsva, mukati megore; Mushure meizvozvo, ivo vanogona kuenderera vachibhadhara rezenisi kana ivo vanorega kugamuchira maficha emunhu wekutanga mushandisi.
Freespire 3 ndeye yemahara vhezheni yeLinspire 7 uye zvakare haina imwe software iyo Linspire 7 yainayo, chimwe chinhu chatinogona kukunda nekutenda kune iyo yekupedzisira neyekunze zvinyorwa Ivo zvakare havazove nerutsigiro nekukurumidza uye nekuvandudza.
Linspire sekuparadzirwa kwemawindo yakakwezva kutarisisa kwakawanda, asi kwete izvozvi uye izvo zvinogona kureva kuti chirongwa chinonyangarika. Sezvo izvo zvavanopa izvozvi, vashandisi uye makambani, vanogona kuiwana yakasununguka zvachose uye nerutsigiro rukuru kupfuura iyo inopihwa nekambani PC / OpenSystems (iyo kambani iri kumashure kweLinspire). Chero zvazvingaitika, kuvapo kwekuparadzirwa kweLindows kunopokana Zvakakosha here? Vashandisi nemakambani vanonyatsoshandisa nekuvatsvaga here? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Linspire 7, kugovera kunomira kuve Lindows
Izvo zvinodiwa kune avo vanhu vanobva kumahwindo uye avo vari kungopinda munyika ye linux. Nhasi zorin inosangana zvizere nechishuwo ichi nenzira yakanaka kwazvo, uye kunyangwe iyo vhezheni yakabhadharwa, zorin yekupedzisira, kwema 19 euros chete, (nhamba ine musoro) inopa tsigiro yose inodiwa.
Asi ReacOS haisi kugoverwa kweLinux, kana ini ndakavhiringidzika?
Eduardo Carlos Perez akadaro
Handifunge kuti zvakafanira, uyo anoshandura OS ndeyekuti arikuda kuchinjira chimwe chinhu chitsva, chakasiyana uye Linux ndiyo sarudzo yakanaka. Kuisirwa kwayo kuri nyore, chero munhu akaisa Windows anogona kuisa kugoverwa kweLinux. Ini ndakadhawunirodha yakawanda asi ini ndinoda Mint.
Pindura kuna Eduardo Carlos Perez